I-10 ye-testosterone ester ephezulu: yintoni efanelekileyo kuwe? | AASraw
/Blog/Ithala/I-10 ye-testosterone ester ephezulu: yintoni efanelekileyo kuwe?
ezaposwa ngomhla 12 / 18 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
I-estosterone esters inokuchazwa nje ngokuba i-moletoli ye-testosterone eneentsimbi zekhabhoni ezixhomekeke kuso. Iikhabhoni zekhabhoni zilawula ulwahlulo lwengqamaniso, ngokwemigangatho elula ukuxiliswa kweziyobisi kwigazi lakho. Ukuxiliswa kwamachiza emanzini kunqunywe ubungakanani bekhamera yekhabhoni i-ester iqulethe. Ikholeji ende yekhabhoni iguqulela kwi-ester ende kwaye ide ester, ubuncinci ubunqabileyo bonyango emanzini. Ngokomzekelo, i-testosterone propionate i-ester eyenziwe ngamaketoni amathathu e-carbon ccc. Ngokuqhelekileyo, oku kuthetha ukuba kukho iintsimbi ezintathu zekhabhoni kule ndawo testosterone ester.
Wumkhwa we testosterone esters?
Isihloko se testosterone ester udidekile kubantu abaninzi, kwaye awukwazi ukufumana inkcazo ecacileyo ngaphandle kwenkcazo echazwe ngabaphengululi abaninzi. Ngendlela elula, kufuneka uqale uqonde ukuba yintoni i-ester ngaphambi kokuhamba ukudibanisa ne-hormone ye-testosterone yesondo. I-Ester yindlela yokwenza iikhemikhali eyenziwe enye, ezimbini okanye ezintathu zeetoni. Ubukhulu be-ester ngokwenene buyiphumo lenani lekhabhoni ekhoyo. Ngoku ungasebenzisa inyilo efanayo ukuqonda i-testosterone esters. Njengoko kuchaziwe ngasentla kwii-esters ezincinci zincinci zeteknoni zincincibilika emanzini kunye negazi.
Umzimba wakho unokuvelisa i-testosterone yemvelo enoxanduva lomsebenzi wesondo kunye nesakhiwo se-muscle. Kubantu abaphantsi kwemveliso ye testosterone ngenxa yezizathu ezahlukahlukeneyo zempilo, banokuya unyango lwe testosterone. Apha ugqirha unokunika izidakamizwa ezininzi ze-testosterone ester emva kokuba zithatha ziya kuxuba kunye negazi lakho kwaye zinike iziphumo ezifanayo kwimvelo. Njengoko uneminyaka yobudala, amanqanaba okuvelisa i-testosterone ahla. Amanqanaba e-hormone ngokuqhelekileyo aphezulu xa ekhulile kwaye eselula.
Kwiminyaka eyi-35 nangaphezulu kwamazinga e-hormone e-testosterone emzimbeni aqala ukuhla nangona izifo ezifana ne-hypogonadism zingabangela. Iimpembelelo ze-testosterone esters ziyahlukahluka ukusuka kolunye uhlobo ukuya kwelinye, kodwa inxaxheba enkulu inempembelelo efanayo. Ngokomzekelo, ukuvuvukala kwendawo yejoza kuyinto eqhelekileyo xa usebenzisa iziyobisi ezinjengegciwane xa ezinye iziphumo zibandakanya intloko, ukungazinzi kwaye ngamanye amaxesha ukunyusa okude.
Kutheni sifuna i testosterone?
I-Testosterone ebizwa ngokuba yi-hormone yesilisa. Ziziphi abantu abaninzi abaziyo kukuba amadoda namabhinqa avelisa ihomoni. I-Testosterone i-hormone ye-androgen eyenza iimpawu zamadoda emzimbeni wakho. Kuveliswa kwindawo enye emzimbeni wakho uze uhambele kwezinye iindawo zomzimba ngegazi. I-hormone yenziwe kwiindawo ezilandelayo;
Kwabafazi baveliswa kuma-ovari
Kwiimpawu ze-adrenal ezifumaneka ngaphezu kweentso zakho ezifumaneka kubini nababhinqa.
Amanqanaba e-testosterone aphezulu kumadoda kunabasetyhini. Ukungalingani kwe-testosterone kwi-gender kungakhokelela kwimiphumo emibi enokuba yingozi ngakumbi xa ingxaki ingaphathwa ngexesha.
Testosterone ister chart
I-Testosterone propionate 57-85-2
Imiphumo emihle Ukuphucula amandla
ClomiGen kunye neNolvaGen
I-Testosterone cypionate kunye ne-testosterone enanthate
I-Testosterone enanthate 315-37-7
I-testosterone cypionate 58-20-8
Umlinganiselo wesilinganiso 250-750 ngeveki
Ubomi obulicla iiveki 2-3
Ukugcinwa kwamanzi Ewe
inyathelo Imiphumo ephantsi
Imiphumo emihle Ukunyuka kwamandla
Imiphumela Ukulahleka kweenwele, i-acne, ukugcinwa kwamanzi kunye ne-atrophic testicular.
ukhuselo Elinye ithebhu ye-Nolvadex kunye ne-proviron imihla ngemihla
ukuchacha Ithebhu ye-Clomid 1 yeentsuku ze-20
Testosterone decanoate kunye ne testosterone Isocaproate
I-Testosterone Isocaproate 15262-86-9
Umlinganiselo wesilinganiso 50-100mgs ngosuku
Ubomi obulicla I-Decanoate, iiveki ze-3-4
Iiveki ze-2 ezingenaso
Ukugcinwa kwamanzi Ncinane
inyathelo I-Decanoate -laylayed
Imiphumo emihle Ukuphuculwa kwamandla, ubunzima obunzima kunye nokuqina kwamandla.
Imiphumela Ukulahleka kweenwele, i-gynecomastia, i-acne kunye ne-atrophy ye-testicular
ukhuselo I-1 ithebhu ye-Nolvadex kunye neProviron kulo mjikelezo
ukuchacha I-Clomid -1 ithebhu imihla ngemihla ye-20 emva komhla wokugqibela unyango.
I-HCG 2500-5000IU ngeveki, i-20yi emva kwosuku lokugqibela lomjikelezo wonyango.
I-Testosterone engenanto (injectable)
Ubomi obulicla Kude kakhulu
Umlinganiselo wesilinganiso Iiveki ze1000mg / 14
inyathelo Kude kakhulu
Imiphumo emihle Ukubuyiswa ngcono, ukuxiliswa kwe-vascularrization engcono, amandla okwandisa kunye namandla omzimba
Imiphumela I-Acne, ukulahleka kweenwele, i-atrophy ye-testicular kunye ne-gynecomastia.
ukhuselo I-1 ithebhu ye-proviron kunye ne-Nolvadex imihla ngemihla kulo mjikelo wonyango
ukuchacha I-Clomid - i-tablet enye imihla ngemihla ye-20 emva komjikelo wonyango.
Umlinganiselo wesilinganiso 250mg / ngeveki
Ubomi obulicla iiveki 1-3
inyathelo Ukukhawuleza nokufutshane
Imiphumo emihle Ukuphucula ngcono, amandla kunye nokuzuza ubuninzi bemisipha, amandla aphuculweyo kunye ne-vascularization engcono.
Imiphumela Ukulahleka kwentloko, i-acne, i-gynecomastia kunye ne-atrophy ye-testicular.
ukhuselo Iproviron kunye neNolvadex - ityhubhu ye-1 / usuku kulo mjikelo wonyango
I-Clomid- 1 ithebhu imihla ngemihla ye-20 emva komjikelo
HCG-thabatha nayiphi na i-dose ukusuka ku-2500-5000 IU nganye ngeveki kwiintsuku ze-20 emva komjikelezo wakho.
Ziziphi iindidi ze-testosterone ze-10?
Isisombululo sokungalingani kwe testosterone kukufuna uncedo lwezonyango kwikliniki yakho ekufuphi. I-testosterone esters yilezi ziyobisi eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukunyanga i-testosterone yakho ephantsi kunye nokwakhiwa kwemisipha. Kukho iintlobo ezahlukeneyo ze testosterone ezikhoyo kwiimarike, nangona kunjalo, musa ukuzithenga kuphela phezu kwekhasti, fumana umyalelo ochanekileyo ogqirha wakho. I testosterone ester zisetyenziswa kakhulu ngabadlali nabadlali abafuna ukwakha imizimba yabo. Ezinye zezikhokelo ze testosterone esters zilandelayo;
1. testosterone Afakela
Testosterone Acetate liphakathi kweesters testersterone zokuqala eziza kuqaliswa kwimihlaba yonyango. Kwabekwa okokuqala kwi1936. I-testosterone i-acetate yinyango esetyenziswa ngokukhawuleza ezayo ngendlela ye-hormone yendoda ye-testosterone. Iphelisa ngokukhawuleza kwigazi lakho elenza lilungele izigulane ezininzi okanye abadlali. Emva kwesicelo, i-acetate ester iqala ukusebenza ngokukhawuleza ngokuphambene nezinye i-testosterone esters ezingathatha ixesha. Ngenxa ye-testosterone emfutshane ubude ubomi obunesiqingatha, kuya kufuneka ukuba uthathe ama-dosages aphantsi emva kwe-2 ukuya kwii-3 iintsuku ukugcina amanqanaba e-testosterone enokuguquka.
I-testosterone i-acetate injection ingabangela ubuhlungu kwaye ingakhokelela ekuvupheni okanye ukuphazamiseka kwiindawo ezingenayo. Abasebenzisi abatsha baya kuhlala beva ubunzima bexesha elithile, kodwa emva kokuba umzimba wakho usebenzise iidayiti, uya kuhamba kakuhle. Nangona kunjalo, ukuba imiphumo iyaqhubeka, xela ugqirha wakho ukuba anike ezinye iindlela zokukhetha.
testosterone Ale dosage
I testosterone i-acetate dosage kuxhomekeke kumyalelo ogqirha wakho emva kokuba uhlole imeko yakho. Nangona kunjalo, amanani aqhelekileyo avela kwi-100mg, 200mg, 500mg, kunye ne-1000mg Kodwa khumbula kuphela umlinganiselo ochanekileyo uza kuhambisa iziphumo ezifunwayo. Umlinganiselo kufuneka uhlalwe ngugqirha wakho, mhlawumbi ngeveki okanye kwimihla ngemihla emva kokuhlolwa kwezempilo. Abanye abantu baya kufuna kuphela amanani amancinci ngelixa abanye banda ama-dosage baya kwanele. Ungathengi izilwanyana ngaphandle kweengcebiso zogqirha kuba zikhokelela kwiziphumo ezinobungozi ze-testosterone acetate. Ukuba ungeyena umqhubi ungaya kwi-bodytoilding ye testosterone ye-acetate eya kukunceda ukwandisa imisipha yakho kunye nobunzima bomzimba.
Testosterone Acetate Ukwakha umzimba
NgeCAS NO: 1045-69-8, i-testosterone acetate iphakathi kwe-steroid ngokukhawuleza ekusebenzeni kwimarike ngoku iphumelele intliziyo yabaninzi bezakhiwo zomzimba. Isiza sisebenza ngokukhawuleza emva kokuthatha idosi yakho. Okubangela ukuveliswa kwee-hormone ezininzi ze-testosterone emzimbeni wakho ezinceda izicubu ezahlukeneyo ukuba zikhule ziquka imisipha yakho kunye nokutshisa amafutha. Njengomyili womzimba, kuya kufuneka ukuba uhambisane nomyinge kunye nokutya okufanelekileyo ukuze ufumane iziphumo ezifunwayo. Isilwanyana sikhona kumabini omlomo kunye namayeza angenayo. Ngaloo ndlela kuya kuwe, ukugqiba ukuba yeyiphi ifomu efanelekileyo kuwe. Nangona kunjalo, ugqirha wakho uya kuba ngumntu ongcono kakhulu kukunceda wenze isigqibo esifanele emva kokuhlolwa kwezokwelapha.
Testosterone Acetate Isiqingatha ubomi kunye nomjikelo
I-testosterone acetate ephakathi kweziyobisi ezinokukhawuleza ezinobunzima bobunzima be-2 kwiintsuku ze-3 kunye nomjikelezo wonyango olungengaphezulu kwamaviki e-12. Ugqirha uza kuza neyona ndlela efanelekileyo kunye nomjikelezo we-acetate we testosterone ngokuxhomekeke kwimeko yakho yempilo kunye neemfuno zakho. Kukho ukhetho lweentsuku zemihla ngemihla kunye neveki, xelela ugqirha wakho oko ukhululekile kunye naye, kwaye uya kukunceda. Ungasebenzisa kwakhona iziyobisi kunye nezinye izinto ezifana neproviron ukunciphisa impembelelo yeziphumo ezibi.
Testosterone Acetate benefits
Ezinye zezona zinto ziyinzuzo ze-testosterone acetate yilo;
Iyakhulisa ukukhula kwemisipha
Ukuphucula ukuhlaziywa kwamathumbu kunye nezifo
Ukuphucula ukusebenza komzimba jikelele
Le yilisi ye-self-injection ukuba ungayifaka kwiimisipha zakho emva kokuboniswa indlela yokwenza ngayo ngugqirha wakho. I-testosterone cypionate yokuthengiswa iphantsi kwegama lophawu lohlobo lweDepo-Testosterone, kwaye unokuyifumana kwiiplani ezahlukeneyo ze-intanethi okanye kwivenkile yakho yonyango. Kwiimeko ezininzi, iyeza lilawulwa nguRhulumente ngenxa yamandla alo kunye nemiphumo engabangela ukuba ingasetyenziswa kakuhle.
I-testosterone cypionate ene-CAS Inombolo 58-20-8, yaveliswa ngasekupheleni kwe-1940 kodwa yaziswa ngokusetyenziswa kwezobisi kwi-1951. Ngaphandle kokusetyenziswa kwezonyango, le nkunkuma isebenza njengencediso enkulu kubadlali nabadlali. Ikhuthaza ukuveliswa kwe-hormone ye testosterone emzimbeni obaluleke kakhulu ekuphuculeni nasekuphuculeni ukukhula kwemisipha kunye nokubonelela umzimba ngamandla. Ngokuxhomekeka kwiimfuno zakho, isilwanyana senziwe ngenjola ubuncinane kanye kwii-1 kwiiveki ze-4. Kucetyiswa ukuba uhambe uviwo lwezokwelapha ukuze ukwazi iqondo elifanelekileyo malunga nesimo sakho okanye iimfuno zakho.
Testosterone Cypionate indlela yokwenza
Iziphumo ze-Testosterone cypionate ziyafana nazo zonke ezinye iziyobisi eziseklasini ye-androgen. I-Steroids kweli qela lonyango lisebenza ngendlela efanayo kwaye iyakhathaza imiqathango efanayo. I-testosterone cypionate ilungele unyango lwe-hypogonadism kumadoda ekubeni ithatha indawo ye testosterone ukuba umzimba wakho awunako ukuvelisa. Ugqirha wakho angakwazi ukumisela lula i-testosterone cypionate injection emva kokuhlola imeko yakho. Ezinye zeempembelelo eziqhelekileyo oza kuziva emva kokusebenzisa le nkunkuma kukuba ubuhlungu okanye ukuvuvukala malunga nommandla wokujova, ukulungiswa kwexesha elide kunye neentloko phakathi kwabanye.
The xabiso lwe testosterone ziyahluka kumthengisi omnye ukuya kwelinye, ngoko wenze uphando lwakho kuqala ukuze uthole umthengisi ohloniphekileyo nonokholo onokunikela ngeedayiti zamayeza ngexabiso elifanelekileyo. Ugqirha wakho unokudlala indima ebalulekileyo ekuncedeni ukuba ufumane i-dotosterone ye-cypionate dose ngexabiso elixabiso. Ukuthatha umthamo ogqithiseleyo weziyobisi kunokukhokelela kwimiphumo emibi, njalo uqinisekise ukuba ulandela isiluleko sakho.
Testosterone Cypionate Isistim
Esi sisicirisi esisinyakatho esinomlinganiselo we-testosterone cypionate we-200 ukuya kwi-800mgs ngeveki. Ugqirha wakho uya kubeka umthamo ochanekileyo ngokuxhomekeke kwinqanaba lakho lomjikelezo kunye nento ofuna ukuyifumana ekupheleni komjikelo. Umjovo kufuneka ulawulwe nge-muscle yakho yangasentla okanye izikhwelo zakho. Ugqirha wakho unokunikela ngeveki okanye nge-Yakoekly, okanye unako ukuya kwindleko yenyanga.
Testosterone Cypionate Isiqingatha ubomi
I-Testosterone cypionate steroid inomdla osebenzayo ukuya kwii-8 iintsuku kwaye enye yezinto ezithandwayo ezithandwayo ezisetyenziswa ngabasebenzi bezakhono. I-testosterone cypionate injection kufuneka ithathwe ngeentsuku ze-7 iintsuku zokufumana iziphumo ezingcono.
Testosterone Cypionate Ukwakha umzimba
Isilwanyana sisongezelelo esilungileyo kubo bobabini abaza kubakho kunye nabadlali abanomdla kunye nabadlali. I-testosterone cypionate inikezela umzimba wakho amandla okwaneleyo ekusebenzeni okukukunceda ukufezekisa ubunzima bomzimba kunye nomzimba oyifunayo. Ekhangela iziphumo ezifunyenwe ngabasebenzisi bokuqala beli chiza emva kokuba zisiwe, unokuqiniseka ukuba eli liyeza elinika ithuba lokugqwesa emsebenzini wakho wokwakha umzimba. Nangona kunjalo, ukuba uhlangabezane neenjongo zakho, kufuneka uhambisane neziyobisi ngokutya okufanelekileyo kunye nokusebenza.
Abaninzi bezakhono zomzimba bathanda le steroid kuba ivelisa iziphumo zekhwalithi kunye nexesha elide. Unokukhetha ukuya kwidaysi yenyanga ngokukodwa ukuba awukhululekile ngeeyunithi zeveki. Okunye iinzuzo ze testosterone zibandakanya;
Uncedo ekulondolozeni izihlunu ezinamaqatha
Ukuququzelela ukukhula kwemisipha
Ukunikela isisombululo sokwakha umzimba ngexesha elide
Ukwandisa amandla omzimba namandla.
Ukuba ufuna isongezelelo esiza kukunceda ukwakha imisipha yakho, kukunika amandla kunye nokutshisa amafutha omzimba wakho kwaye i-testosterone decanoate yinto efanelekileyo kuwe. Nangona kunjalo, kufuneka uqonde ukuba i-testosterone iza kwiifom ezahlukeneyo kwaye uhlobo olukhethileyo lunokuchaphazela kakhulu impumelelo yakho kwiinjongo zakho. Abaninzi bomzimba basebenzisa I-TESTOSTERONE I-STEROIDS EZIQHELEKILEYO ukukhupha i-androgen receptors emzimbeni. Isilwayo sinezibonelelo ezahlukahlukeneyo ezinjengokukunceda ukuphucula i-sex drive kubayeni abane-erectile dysfunction. Ukukhula kwemisipha kunye nokuzinza, le nkunkuma isebenza umlingo ukuba ulandela isilinganiselo esifanelekileyo kunye nokutya.
I-Testosterone yahlukana nokufumana ukuthandwa kwayo ngenxa yeziphumo ezintle ezibonelela kubasebenzisi. Ekuqaleni, isilwanyana sasisetyenziselwa ukuxazulula iingxaki ezincinci ze-testosterone kumadoda, ngaphambi kokuba kuqaphele ukuba inokunceda abancedisi bomzimba ukuba bafumane iinjongo zabo. Inyaniso yokuba i-dose yezilwanyana inokuthi ijojowe kanye ngeveki yenza ukuba uyithande kubaninzi bezakhiwo zomzimba abangayithandi umlomo we-steroids. I-testosterone decanoate yipilisi efanelekileyo kakhulu inceda ekwandiseni imveliso yamaseli obomvu emzimbeni. Kwiminyaka emininzi ngoku ukususela kwesi sifo, kubonisa ukuba isisombululo esiphezulu kwimiphumo ephantsi ye testosterone kumadoda nabasetyhini.
WIngqungquthela i-Testosterone decanoate?
I-Decanoate yi-ester, kwaye njengoko ichazwe ekuqaleni kwinqaku, i-ester yinkomfa yendalo eyenza i-pharmacokinetics yiphina into. Ngendlela elula, inceda ekuthwaleni izidakamizwa ngomzimba wakho kwaye unempembelelo ebonakalayo kwindlela ezithinta ngayo umzimba wakho. U-Ester unquma isigamu-ubomi saso nasiphi na isicatshulwa kwaye lizakuhlala ixesha elide emzimbeni wakho. I-Testosterone idibanisa umzimba unesigamu seentsuku ze-7 iintsuku, oku kuthetha ukuba uza kufuneka kuphela ukujoba isilwanyana kanye ngeveki. Oko kuthetha ukuba i-testosterone iyaqhathaniswa nokufana ne-deca yinto efanelekileyo kakhulu kwindoda enobunzima bokugcina izihlunu ezintle.
Testosterone Decanoate Half ubomi
Emva kokuba uthathe umthamo wakho isicatshulwa sihlala sisasebenza emzimbeni wakho kwi-7 kwiintsuku ze-10. Ngaloo ndlela, umthamo kufuneka uthathwe ubuncinane kanye ngeveki. Landela imiyalelo yegqirha yeziphumo ezingcono kwaye ufezekise iinjongo zakho ngokufanelekileyo.
Testosterone Decanoate Isistim
Ngeenjongo zokwakha umzimba i-testosterone enconywayo ihlawulela uluhlu lwe-250mgs ukuya ku-1000mgs ngeveki. Kubaqalayo bathatha i-250-500gms ngeveki kuya kuba kuhle kodwa umthamo unganyuswa kumjikelezo olandelayo. Ukutya okufanelekileyo kunye nokuzivocavoca kuya kuba yinto efanelekileyo ekuphumezeni iziphumo eziphezulu kunye nezibonelelo.
Testosterone decanoate iinzuzo
Iinjongo eziphambili ze-testosterone eziza kukunandipha ngokusebenzisa eli liza ngokuchanekileyo ziquka;
Ukubonelela ngokubanzi ekuququzeleleni ukukhula kwemisipha
Ukuphucula nokugcina izihlunu ezinamafutha
Ukuphucula umbane wonke amandla okanye amandla.
Ngakolunye uhlangothi, i-testosterone decanoate kunye ne-cypionate inokusebenza ngokufanayo kwaye inika umphumo ofanayo, kodwa umahluko ufika kwisiqingatha-ubomi. Kwi testosterone decanoate, uya kufuneka kuphela ukujoba idosi enye ngeveki ngelixa u-cypionate kufuneka ujobe ubuncinane kanye emva kweentsuku ezimbini okanye ezintathu. Impembelelo echaphazelekayo yile nkunkuma kukuba inokukhusela imveliso yemvelo ye testosterone emzimbeni wakho ukuba umzimba wakho awuyi kukwazi ukwakha izihlunu ezifunekayo emva kokugqiba umjikelo weziyobisi. Ngokuxhomekeke kumandla akho omzimba, unokuba nemiphumo eyahlukileyo eyahlukileyo ngezinye iimeko xa ungasebenzisi i dose efanelekileyo. Ngokomzekelo, unokufumana ukujuluka okungaqhelekanga, ukungazinzi okanye i-acne ngamanye amaxesha. Njalo ulandele imiyalelo yakho ugqirha kwaye xa kukho nayiphi na imiphumo emibi kumxelela.
4. Isanti enomthamo
Le yilisi yejoza ekulungele ukunyanga iimeko ezibangelwa yi-testosterone ephantsi njengokuba akakwazi ukwakha imisipha, ukungabi namandla okanye ukulibazisa ubusuku kunye nokunye ukungalingani kwe-hormone. Ugqirha kufuneka atyumbe i-testosterone enanthate ukususela ekusebenziseni kwakhe kakubi inokuphumela kwimiphumo engavumelekiyo.
I-testosterone enanthate ingenye yezonabolic steroids ezinamandla kakhulu eziyaziwayo ukususela ekukhululweni kwayo kwimarike kwi-1930s. Okwangoku, iziza ziqhubeka ziphakathi kwe-steroid ekhethiweyo ngabaninzi bemizimba kunye nabadlali. Ekuqaleni, i-steroid yayinganyathiselwe nayiphi na i-ester eyenza ukuba isilwanyana singene kwigazi ngokukhawuleza. Kwi-1937, umenzi waqala ukudibanisa iyeza kunye nemichiza e-ester eyashintsha phantse yonke into kule steroid. Ngomnyaka we-1950, umenzi weziyobisi wenza isigqibo sokubandakanya u-esanthate ester ehlanganiswe kwisichengiso esinika amandla amaninzi abaphucula umzimba namhlanje.
I-Testosterone enanthate i-250 yipakethi yokusetyenziswa kwezilwanyana oyifumanayo kwimarike. Nangona kunjalo, idosi inokulungiswa ngumgqirha wakho emva kokuhlola imeko yakho. Kubadlali, le nkunkuma ayiyi kukunceda ukuphucula ukusebenza kwakho, kodwa iya kunceda ufezekise iziphumo zakho ezifunwayo. Ukwakhiwa komzimba weTesttosterone Unceda unokubangela imisipha yakho kwaye ulawule amafutha emzimbeni wakho. Njengoko uqhubeka nokuzilolonga rhoqo, uza kufumana izihlunu kunye nesimo somzimba oyifunayo. Ukuba ungeke ufumane iziphumo ezingaqhelekanga, qhagamshelana nodokotela wakho ngoncedo.
I-testosterone enanthate yokuthengisa itholakala kwii-pharmacy ezahlukahlukeneyo, kunye neentengiso ze-intanethi, nangona kunjalo, zithenga izilwanyana phantsi kweengcebiso zakho zezempilo. Iziphumo zeziyobisi zinobungozi xa unqumla okanye ungayisebenzisi kakubi kwaye awuze uphinde uhlaziywe. Ukuba ugqirha okhuselekileyo ugqirha ugqirha wakho. Emva kokuba umjikelezo we-testosterone unanthate ufanele ukwazi ukufumana iziphumo, kwaye xa ungaboni na, xela ugqirha wakho.
Testosterone Enanthate Isistim
Oogqirha abaninzi bakhetha umthamo we-testosterone umthamo we-enanthate, nangona iyeza liza kumaqondo ahlukeneyo. Ngokomzekelo, izilwanyana zonyango zihanjiswa ngokubhekiselele kwiinjongo ofuna ukuzithengisa ngakumbi ukuba unomzi womzimba - umlinganiselo osemgangathweni walolu hlobo lweziyobisi ukusuka kwi-250mg ngosuku ukuya kwi-750mgs ngeveki. Kwezinye iimeko, i-bodybuilders ithatha amanani aphezulu ukuya kwi-1000mgs iveki nganye. Isilinganisi sinokumiselwa kwinqanaba lebhajethi yakho, kuba i-doses abaphantsi koqalayo bayanconywa ukuba banokunyuswa kamva.
Testosterone Enanthate Half ubomi
I-testosterone enanthate ine-half-life active yeentsuku ze-10.5, kwaye kufuneka ufumane injola yakho kwimizi emva kweentsuku ze-10. Nangona kunjalo, ugqirha wakho unokuyila i-dose efanelekileyo yeveki eya kukunika amandla kunye nokwakha imisipha.
Testosterone Enanthate Uhambo
I-testosterone enanthate ineemeko ezahlukeneyo kuxhomekeke kwinqanaba lakho, kwaye ugqirha wakho uya kuba kwindawo efanelekileyo yokuyila iyona nto ibhetele kuwe. Ngokomzekelo, umjikelezo we-testosterone-enanthate umjikelezo uquka ukusetyenziswa kwamanani amancinci kunye nezinye izinto ezifana nee-Arimidex ne-Deca-Durabolin. Umjikelezo ohamba phambili ongumjikelezo wesibini, amanani ayenyuka emva kokuba umzimba wakho usetyenziswe kwizibalo zokuqala. Isilwanyana apha sisetyenziswa kunye ne-Dianabol 40mgs ngosuku ngemjikelezo wonke. Umjikelezo we-Hardcore ungumgangatho ophezulu olungele ukusetyenziswa kwabasebenzisi be-Testosterone abanomzimba, kwaye nanko amanani aphezulu kakhulu.
Inzuzo yokuphucula i-Testosterone
Esi sigqirha sibonakalise ukuba sidlale indima ebalulekileyo ekuphuculeni imisebenzi yabasebenzi bezemidlalo kunye nabadlali. Xa kuthathwa ngokuchanekileyo le nkunkuma ingakwazi ukuhambisa imiphumo eyahlukeneyo, inzuzo ye-testosterone enanthate ezibandakanya;
Ukwandisa nokuphucula ukukhula kwemisipha
Ukuphucula izicubu ezinokuphulukana emva kwengozi okanye ukwelula ngexesha lokusebenza.
Ukwandisa amandla omzimba jikelele kunye namandla anceda abadlali kunye nabadlali bomzimba ukuba bafezekise iinjongo zabo.
Ukutshisa amafutha omzimba nokunceda amalungu omzimba ukuba afumane isimo somzimba abayidingayo.
I-Testosterone phenylpropionate (i-BAN) (igama lomatshini we-Testolent), okanye i-testosterone phenylpropionate, okunye okuthiwa yi-testosterone hydrocinnamate, ngu-anabolic-androgenic steroid ene-injini (AASraw) kunye ne-androgen ester - ngokucacileyo, i-C17β phenylpropionate ester ye testosterone - eyake yenziwa ngaphambili eRussia. Kwakuqala ukufakwa kwiincwadi zezesayensi kwi-1955 kwaye yayiyinxalenye yezinto ezimbalwa zezohwebo ze-AAS, kodwa kwakungasetyenziswanga ngokubanzi. I-testosterone phenylpropionate nayo yayibangele inxalenye yeSustanon no-Omnadren.
I-Testosterone phenylpropionate yaqala ukukhishwa kwi-market nakwi-1955 ngeSicomed Pharmaceutical house kodwa yayithengiswa phantsi kwegama le-brand Testolent. Isilwayo asifumanekanga nakwiimarike ezimnyama emva kokuba sikhululwe. Nangona kunjalo, kwiminyaka yamuva ifunyenwe kwaye ifunyanwe ngokuqinisekileyo ngababuci bomzimba kunye nabadlali. Isilwayo sibe yinxalenye yamanye ama-testosterone amaxube afana ne-Omnadren.
I-Testosterone phenylpropionate yonyango efakwa kwiqela le-orrogens yezilwanyana. I-Testosterone phenylpropionate yilezi ziza kufuneka zilawulwe ngongeniso. Emva kwentsholongwane, le nkunkuma ihlala isebenza ngokumalunga neentsuku ezintlanu xa ungathatha enye idoksi. Isilwanyana singasetyenziselwa ngokuzimeleyo okanye silawulwe ngamanye ama-testosterone ester for testosterone unyango kwisigulane esinokuqinisekiswa kwe-testosterone. Ngakolunye uhlangothi, olu tyenziso olutshwayo lweziyobisi lulungele ukuphucula umzimba kunye nobukhulu bamasipha.
I-trademark efanelekileyo ukuba abasebenzisi bafanele bacinge ngezinto ezi zinto kukuba iimpendulo ezifana nokugcinwa kwamanzi kubonakala kuphela ngezikhathi ezithile. Ukongezelela, ngokuthatha i-testosterone phenylpropionate, izixhobo zomzimba zibika ukunyuka kwekhanuko, amandla kunye nomgangatho. Konke ekusebenziseni lolu hlobo lwe-testosterone ngendlela efanelekileyo iimpembelelo zinjengezinye i-testosterone esters kodwa akudingeki ukuba batyelele ukunyuka kwamanzi okanye benze ukugcinwa kwamanzi.
Inzuzo ye Testosterone phenylpropionate
Le testosterone steroid iye yafumana udumo phakathi kwabakhi bomzimba ngenxa yemiphumo emihle emzimbeni. Ezinye zaziwa iinzuzo ze testosterone phenylpropionate zibandakanya;
Ukuphucula isisiti samanzi ngokuphucula amandla okugcina i-nitrogen.
Ukukhuthaza amandla omzimba jikelele, ngaloo ndlela kwenza abadlali bafikelele ixesha elide baze bafumane iziphumo ezifunwayo. Kwakhona kuphucula ukusebenza ngokubanzi kombubi womzimba kunye nomdlali.
Ukukhuthazwa kwemveliso yamaseli obomvu emzimbeni.
Ukunciphisa nokutshisa amafutha omzimba.
Testosterone Phenylpropionate Half ubomi
I-Testosterone phenylpropionate yicirisi ejoyiweyo kunye ne-half-life of 3 kwiintsuku ze-4. Uya kufunwa ukuba uthathe umthamo wakho kanye kwiintsuku ze-4. Ugqirha wezobugcisa kufuneka uphathe umjovo.
Umthamo weTesttosterone phenylpropionate
Abagijimi abaninzi okanye abakhi bomzimba basebenzisa le mveliso kabini ngeveki okanye emva kweentsuku ezimbini. Ekunene umthamo we testosterone phenylpropionate i-300gm ukuya kwi-3000mg ngeveki. Nangona kunjalo, iziphumo zecandelo le-testosterone phenylpropionate zincinci kakhulu xa zifaniswa nezinye ze-steroids.
Testosterone Phenylpropionate Uhambo
I-testosterone phenylpropionate steroid ingasetyenzisisana kunye namanye ama-esters amancinci angaphantsi komjikelezo we-10-veki. Umjikelezo ogqwesileyo we-testosterone phenylpropionate kufuneka uquke umjikelezo wokuhlola umlinganiselo onokulingana kwe-300mg ngeveki kunye ne-NPP yeklasi kunye ne-dose ephakanyisiweyo ye-300mg ngeveki. Umjikelo omfutshane kufuneka ube phantsi kweeveki ezilishumi kubasebenzi bomzimba.
6. Testosterone Isocaproate
Isocaproate i-ester ifakwe kwi-anabolic steroid. I-ester engakwazi ukuxhunywa ngokufanayo kwi-steroids nje ngeCypionate eyaziwayo okanye Ukuxhoma esters. Njenge-Cypionate kunye ne-Enanthate, i-Isocaproate nayo inokufakwa kwi-hormone ye testosterone, nangona kunjalo, ngenxa ye-Isocaproate, oku kuya kuba yindawo eyona nto esiyibona esiyijoyine. I-Testosterone-Isocaproate, umongo we-monoester ongaqondwanga; ngethuba lokuba uyifumene, kwakungekho ngaphezulu ibango lokwenza ulungiso, kwaye akukho nantoni na ukuba ibe ne-Testosterone Isocaproate njenge-ester enye. Lapho siza kufumana i-esterroate ester ngokuqhelekileyo kwaye apho isebenza ngenjongo ephakamileyo kumxube we testosterone; ngokucacileyo uOnadren kunye Sustanon 250. I-Omnadren kunye ne-Sustanon-250 zombini i-testosterone ihlanganiswe neesters ezine eziqhotyoshelweyo; iesters ezine zobukhulu ezahlukeneyo ezenza i-comptosterone eyodwa.
I-testosterone Isocaproate yi-ester, kwaye iyatholakala kuphela xa ifakwe kwi-steroids njenge-Omnadren kunye ne-Sustanon 250. Imbali yale ester ingalandelwa ukusuka kwi-1970 xa i-Sustanon 250 ikhishwa kwimarike. Indima ye-Isocaproate ester kukuvumela ukuba izidakamizwa zihlale ixesha elide emzimbeni wakho kwaye zivumele enye i-steroid ihlanganiswe ukusebenza kakuhle. I-esterroate ester inikeza i-steroids isigxina-ubomi ukusuka kwi-7-9 imihla.
Testosterone Isocaproate Isistim
Ekubeni i-Isocaproate ayikho ngokuzimeleyo, i-testosterone isocaproate dosage iyahluka kuye kuxhomekeke apho ihlanganisiwe khona. Ngokomzekelo, kwi-Sustanon 250 ukufakwa kwesi sitya ngu-60mgs kunye nomyinge we-Sustanon 250 kwii-250mgs ukuya kwi-1500mgms ngeveki. Ugqirha wakho uza kukunika i-dosage efanelekileyo kuncike kwiimfuno zakho.
Testosterone Isocaproate Isiqingatha ubomi
I-Testosterone Isocaproate ine-half-life active to 7-9 iintsuku ezithetha ukuba umlinganiselo weyiphi na i-steroid eqhotyoshelweyo nale ester kufuneka ithathwe kanye ngeveki. Nangona ugcwalisa umjikelo wakho namhlanje, uya kuqhubeka ujongene nemiphumo yeziyobisi kwiintsuku ezimbalwa ezilandelayo.
testosterone Isocaproate Benefits
Iintlawulo zeTestosterone Iinscaproate zinokusekelwe kumxube afana ne-Omnadren kunye ne-Sustanon 250 kwaye iyakwazi ukwahlukaniswa ngamaqela amabini; Amagunya afunyenwe ziimpawu ezingentla kunye nokuba luhlobo luni lwenkqutyana lunikeza ngokuphambene nesimo esisodwa se-ester. Njengoko kuhlolwe kwinqanaba lokuqala, amandla enkampu ye-testosterone kukubonelela ngezona zinto zimbini kunye ne-ester engqiqweni, kwaye oku kunika i-testosterone esheshayo enefuthe elihlala ixesha elide. Oku kungathi ngathi kulula kakhulu, kodwa inyaniso yolu mbandela ayikho nto kakhulu kunoko. Ngelo xesha, sinamathuba athile ngokuxhomekeka kwiimpawu ezingentla, kwaye njenge-Omnadren kunye ne-Sustanon 250 esetyenziswa ngokupheleleyo ukusetyenziswa, siza kugxininisa kwiinzuzo ezikuloo nto.
Ngomdlali wexesha elingekho, umntu onethemba lokufumana ubuninzi bomlinganiselo obunzima kunye nobunjani, imilo engabonakaliyo iyisigqibo esilungileyo njengoko ziya kuhamba phambili kumacala amabini. Ukuqhubela phambili, ngokusolulela imo yendalo, ulungele ukufumana ubunzima obufanelekileyo kunye nomlinganiselo ongaphantsi kwesisindo kunye nesohlwayo, kunye nelo lixabiso. Imixube efana nayo ingasetyenziselwa ukusika kwakhona; zonke izinto ezicatshangelwayo, ukuphuculwa kwesondlo kuthetha ukunyusa amandla amaninzi, kunye ne-testosterone yindoda enkulu yokulondoloza isisitye isisigqibo esilungileyo kunoma yiphina inqubo yokusika.
7. Testosterone propionate
Le yincwadana ye-testosterone efutshane kunazo zonke ezichitha ngokukhawuleza kwigazi. Ngoko ke, ukuba ufuna imveliso esheshayo, u-testosterone propionate uya kukhetha. Nangona kunjalo, isilwanyana sinomdla wesiqingatha sosuku olunye. Ngako oko kuya kufuneka ujobe amayeza rhoqo iintsuku de umjikelo uphela. Ixabiso lentengo ye-Testosterone ye-propionate ukusuka kumthengisi omnye ukuya kwelinye kunye nomyinge owukhethayo. The lekisa testosterone propionate vs i-cypionate, ngokubhekiselele ekusebenzeni unokukhetha ipropionate kuba isebenza ngosuku, kodwa kufuneka uthathe umthamo wakho imihla ngemihla.
Njengamanye ama-steroids, i-testosterone propionate yaveliswa kwi-1930 yokuqala kwaye ijoliswe ekuncedeni ukuphucula amanqanaba e-hormone ye-testosterone emzimbeni. Esi sigqirha sithandwa ngokubanzi kwihlabathi phakathi kwababuciko bomzimba ukuze kubonakale kubalulekile ekubancedeni ukuba bafezekise iinjongo zabo. Kwimashumi eminyaka ngoku ifuna ukuba izidakamizwa zikhuphuke ziqwalasele iingenelo ezibonisa kubasebenzisi ezibandakanya ukuphucula i-hormone ye-testosterone njengezakhiwo zomzimba. Iimpawu zamadoda ukuba le hormone inikezela kwakhona esinye isizathu sokufuna okukhulu.
Testosterone Propionate Isistim
I-testosterone propionate cycle beginner ifuna ukuba uqale ngeesisindo ezincinane ezivela kwi-50-100mgs ukuba zijojowe emva kweentsuku ze-2-3. Isonto le testosterone propionate ukusuka kwi-200 ukuya kwi-500mgs.
Isilwayo sinokubangelwa kwimiphumo emibi yecala labaqalayo abathatha amanani amaninzi okokuqala. Ugqirha wakho uza kukunika isilinganisi esifanelekileyo emva kokuvavanya imeko yakho. Uya kuziva impembelelo testosterone propionate ngaphambi nangemva kuthatha. Khumbula ukuhlala ulandela imiyalelo yokulinganisa. Nangona kunjalo, ukuba awunakulungeleka kwimizuzu yesibini, ungaya kwijojo ehlala inyanga.
Testosterone Propionate Isiqingatha ubomi
Iipilisi ze-testosterone propionate zinomlinganiselo wobomi beeyure ze-24 kodwa i-gel injectable inomsebenzi osebenzayo ukuya kwiiveki ze-4. Ugqirha wakho uya kukwenza i-intervals efanelekileyo yexesha eliza kwenza ukuba ufumane iziphumo ozifunayo.
Emva kokuba isilwanyana sakhishwe kwiimakethi kwi-1930s. Kwavavanywa kwaye kuqinisekiswe ukuba kuncedwe ukuphucula amandla omzimba kunye nokuphucula isakhiwo se-muscle. Isiza linikeza izihlunu ngezondlo ezifanelekileyo ezibenza bakwazi ukukhula kwaye xa umsebenzisi enza izivivinyo ezifanelekileyo unokuqiniseka ukuba ufikelele emzimbeni obuninzi olufunekayo kwimidlalo. Ukuba khona kwama-hormone e-testosterone emzimbeni wakho kuthetha ukuba uya kuba neenzuzo ezininzi ngaphandle kokwakha izihlunu ezifana nophuculo lomntu wakho olufana nokugqamisa ilizwi kunye nokukhula kweenwele zobuso phakathi kwabanye abaninzi.
Nangona kunjalo, ukubonisana nodokotela wakho kuyakuba yindlela ekhuselekileyo yokufumana iziphumo ze testosterone propionate. Ukutshiza okanye ukuvuvukala kwiindawo zokungenwa kuyinto eqhelekileyo, kodwa kufuneka ilahleke emva kwexesha elithile xa isiphumo singasuki kwaye ubuyele kwidokotela ngokukhawuleza. Ukukwabelana ngesilwanyana kunye nabanye abaqulunqa umzimba kungabungozi kuba awuqinisekanga ukuba isilwanyana sisabela njani ngomzimba wakho. Uviwo lwezonyango lubaluleke kakhulu ngaphambi nangemva kokuthatha i-dosesterone propionate dose yakho.
Testosterone propionate iinzuzo
Unceda ukufumana izihlunu ezintle
Ukukhuthaza isondo ngesondo
Ukukhulisa ukukhula kwemisipha
Ukutshisa amafutha esisu.
Sustanon 250 steroid isilwanyana esilungelelanisa abantu besifo esiphantsi kwemveliso ye testosterone kunye namanqanaba abaphikayo amaninzi amancedo. I-Sustanon 250 ivumela abasebenzisi ukuba bahlakulele iimpawu zesilisa abanqwenela njengokunzulu kwezwi, ukuqinisa imisipha kunye nokukhula kweenwele emzimbeni okanye kwiindawo zobuso.
I-Sustanon 250 yi-steroid eyenziwe yi-Organon Inkampani kwi-1970s ukunceda amadoda ukuba imizimba yabo ayikwazi ukuvelisa i-hormone ye testosterone. Isilwanyana safumana ukuthandwa phakathi kwexesha elifutshane kakhulu emva kokuba likhishwe kwiimarike kuba libonakala liyisisombululo sonyango kubadlali abaninzi kunye nabazimba. I-Sustanon 250 yenziwe ngokudibanisa i-testosterone ester e-4 eyahlukeneyo, equka, i-30mg ye-testosterone propionate, i-60mg-testosterone phenylpropionate, i-100mg-testosterone decanoate kunye ne-60mg-isocaproate. Ukubunjwa kwenza loo mveliso inamandla kwaye iluncedo kubabini bomzimba kunye nezinye iingxaki ezincinci ze-testosterone.
Ungayifaka njani iSustanon 250
Le injini yejoza ingenikwa kuphela ngeveki okanye emva kweentsuku ze-3 ngenxa yamandla ayo eyenza ukuba isebenze emzimbeni wakho iintsuku ezithile. Nangona kunjalo le nkunkuma ivinjelwe yi-world anti-doping agency, ngoko-ke ayiyona ingqibelelo kubadlali beemidlalo. Unokufaka injini kwi-muscle yakho ngokwakho okanye ucwangcise ukutyelela rhoqo kwiklinikhi ukuze ufumane ijojo kumgqirha wakho. Isiqingatha-esichengeni sezilwanyana sichaphazelekayo senza ukuba kube lula kubasebenzisi abaninzi kodwa rhoqo ujonge ama-dosages ukuphepha iziphumo ezibi.
I-Sustanon 250 yokwakha umzimba
Ngokwenene, ngaphandle kwama-hormone anele okwenziwe emzimbeni wakho, kuya kuba nzima ukufezekisa ubunzima bomzimba obunqwenela njengombumbi womzimba. Kungakhathaliseki ukuba ukutya okanye umsebenzi owenzayo imihla ngemihla, kufuneka ube namahomoni angamadoda ukuphucula ukusebenza kwakho. Isiza sisebenza ngokuvuselela umzimba wakho ukuvelisa i-estrogen ephezulu, ngaloo ndlela ufumana inqanaba elincomekayo le-testosterone. Sustanon 250 unceda ekuxazululeni zonke iingxaki ezibangelwa amanqanaba aphantsi e-testosterone kuquka ukuzakhela nokugcina izihlunu ezintle.
Testosterone Sustanon 250 Isistim
Ilungelo le-Sustanon 250 umlinganiselo wezakhiwo zomzimba kufuneka zixhomekeke kwi-250mgs -1500mgs ngeveki. Nangona kunjalo, i-500-750mg yinto eqhelekileyo ye-dose ngeveki. Abanye abantu banokuziva bengakhululekile ngeenjuni ze-Sustanon 250 emva kweentsuku ezintathu kodwa ukuya kwenzalo yeveki nganye kuya kuba yingcamango enkulu.
Ziziphi iimali zeSustanon 250?
Iimpumelelo ezibalulekileyo eziya kukunandipha emva kokusebenzisa le myeza yi-testosterone rhoqo kwiiveki ezintathu emva kwejojo. Oko kuthetha ukuba uya kuba namandla omzimba kwaye kufuneka uqhube ngesondo phakathi kwamanye ama-testosterone. Ngakolunye uhlangothi, ukuba usebenzisa iilisi ixesha elide, kufuneka uhambe uvavanyo lwegazi ukujonga iqondo lakho lee testosterone. Khumbula amanqanaba aphantsi okanye ama-hormone angaphezulu angabungozi. Enye inzuzo enkulu oyakuzuza ngokuthatha le nkunkuma kukuphucula nokugcina izihlunu ezintle.
Testosterone Sustanon 250 Imiqulu
Imijikelezo ye-Sustanon 250 iquka ezinye izixhobo kuba ungeke ukwazi ukufumana izihlunu ezinqambileyo ozifunayo, usebenzisa iSustanon kuphela. Nantsi umjikelezo we-Sustanon wokubhukuda;
Iveki Sustanon250 Dianabol Ostarine
MK-2866 Aromasin N2 Deca Durabolin
1 500mgs / iveki 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / iveki
2 500mgs / iveki 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / iveki
3 500mgs / iveki 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / iveki
4 500mgs / iveki 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / iveki
5 500mgs / iveki 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / iveki
6 500mgs / iveki 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / iveki
7 500mgs / iveki OFF 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / iveki
8 500mgs / iveki OFF 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / iveki
9 500mgs / iveki OFF 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / iveki
10 500mgs / iveki OFF 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / iveki
11 500mgs / iveki OFF 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / iveki
* ed ithetha imihla ngemihla / ngemini
Le yilisi esenza ixesha elide eliza kwi-capsule okanye ifom ye-injection. Ukhetho luhlala lenu, kodwa iindidi ezimbini zamanani ziyahluka malunga nokusebenza. Isilwanyana sifanelekileyo kumadoda anamaqondo aphantsi e-testosterone okanye imizimba yabo ayikwazi ukuvelisa i-hormone efunekayo kakhulu. I-testosterone Undecanoate inokukunceda ekuphuhliseni iimpawu zomzimba wesilisa ezifana nokujuliswa kwezwi, ukusabalalisa i-fat kunye nesakhiwo semisipha.
Testosterone engaxhaswanga yaphuhliswa kwi-1980 yi-Organon Drug Inkampani ejolise ekuboneleleni ngeziyobisi ze-testosterone ezingazange zihambe ngesibindi. Kwakhona, le nkunkuma yayiyimbono yokudala i-anabolic androgen steroid (AASraw) ezinokukunceda ekwenzeni uphando lwe-testosterone oluphantsi kwamadoda. Nangona kunjalo, ukuqaliswa kwamanye ama-ester testersterone aqina ngakumbi ngokuphathelele ukunika iziphumo, i-testosterone undecanoate ilahlekelwa ngokukhawuleza phakathi kwabaninzi bezemidlalo kunye nabadlali.
Njani i-Testosterone i-undecanoate Sebenza
I-testosterone undecanoate ihamba nge-lymphatic system kwaye ingabi nesibindi njengezinye i-steroids. Ngaloo ndlela, isilwanyana singena kwigazi ngaphandle kokutshabalaliswa okanye ukuchaphazelwa sisibindi esithetha ukuba ujongene nemiphumo epheleleyo. Inkqubo ye-steroid eya emzimbeni wakho yenza ukuba ihluke kwezinye i-methylated steroids.
Testosterone Undecanoate Ukwakha umzimba
I-hormone yesondo yeTesttosterone idlala indima ebalulekileyo emzimbeni ukulahlekelwa ngamafutha, ukufumana amandla kunye nokwakhiwa kwemisipha phakathi kwamanye amadoda. Uninzi lwabadlali bezemidlalo kunye nabasebenzi bomzimba baxhamla le nkunkuma ukuba bavuselele imisipha yabo kunye nokuphucula ukusebenza kwabo. Nangona i-testosterone undecanoate kuthiwa yi-steroid ebuthathaka, ingaba nemiphumo emihle kwisakhiwo sakho semisipha kunye nokusebenza xa uthatha umlinganiselo ophezulu ohamba kunye nokutya okufanelekileyo.
Nangona kunjalo, abo abangasebenzisi izichane ngokuchanekileyo baya kuba nemiphumo emibi engaphathwa ngayo xa udibana nodokotela wakho ngexesha. Isakhiwo seTesttosterone esingenasidlangalaleni Unokuba luncedo xa uhamba ngejoyi ye-testosterone engenakunokuthi ungayithatha kuphela kwi10 okanye kwii-14 iiveki. Ngokuxhomekeke kwimeko yakho ugqirha uya kukwenza umyinge kunye nomgca we-testosterone ongenasiphelo. Iifomsules umthamo we-testosterone ezingekho phantsi kwexesha lokuphila unomphela kuphela, kwaye uya kufuneka uthathe umthamo wakho imihla ngemihla.
Ezinye zezona zinzuzo eziphambili ze-testosterone ziquka;
Ukuphucula ukulahlekelwa kweoli
Ukuphucula ukuhamba ngesondo
Ukuphucula ukuzuza kwemisipha
Testosterone Undecanoate Imilinganiselo
Kubafundi bomzimba okanye abagijimi i-testosterone i-nonecanoate dosage ihamba nge-480mg ngosuku. Nangona kunjalo, kubasebenzisi besikhathi sokuqala, ugqirha unako ukunciphisa amanani kwaye ukwandise kunye nexesha. Xa ugqiba ukudibanisa iziyobisi nezinye i-steroids, i-200-250mgs iya kulungile. Isilwanyana kufuneka sithathwe ngaphambi kokutya okuphambi komsosi wesidlo sakusasa kunye nobusuku ngaphambi kokutya.
Testosterone Undecanoate Imiqulu
Ungasebenzisa le steroid eceleni kwezinye izinto ezifana ne-deca Durabolin, i-trenbolone kunye ne-promobolan. Ukuba uthatha isigqibo sokusebenzisa i-andriol kunye nezinye izinto, kuyacetyiswa ukuba uyisebenzise kumaxabiso aphantsi njenge-240mg ngosuku. I-andriol iya kusebenza njengesiseko sovavanyo kwaye inike ezinye iilithuba ithuba lokusebenza ngokufanelekileyo ngaphandle kokufumana nayiphi na imiphumo engaphezulu.
Iveki Andriol Promobolan Aromasin Cardarine N2Guard
1 250mg / ED 600mgs / iveki 10mgs 20mgs / ED 5caps / ED
2 250mgs / ED 600mgs / iveki 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
3 250mgs / ED 600mgs / iveki 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
4 250mgs / ED 600mgs / iveki 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
5 250mgs / ED 600mgs / iveki 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
* ED ithetha ngosuku okanye ngemihla
Le nkunkuma ye-anabolic eyayiqulunqwe okokuqala kwi-1961 e-East Germany yinkampani yeJenapharm yokwenza imithi yokwelapha izifo. Isilwanyana safumana udumo emva kokubaluleka kwempumelelo ye-East German Olympians kwi-1960s kwi-1980s. I-Turinabol njengamanje isetyenziswe ngabadlali kunye nabakhi bomzimba ukuphucula umzimba wabo kunye nezihlunu kunye namandla abayidingayo ukuba baqhube kuyo yonke imisebenzi yabo. Kubafundi bomzimba, unokufikelela kwiziphumo ezingenakufunyanwa ukuba usebenzisa isilwanyana ngokuchanekileyo.
Njani iTurinabol Sebenza
I-turinabol dosage ifumaneka kuphela kwifom ye-capsule yomlomo. Okwangoku, akukho fom injectable kule steroid. Akukho TURINABOL YOKUTENGA, kwaye iyeza lifumaneka kuphela kumalabhu angaphantsi komhlaba. Isidingo sonyango sisenyuka sicinga ngeempembelelo ze-turinabol ezibonelela kubasebenzisi. Isilwanyana saziwa ngokuba siphumelele ekuphuculeni i-protein protein synthesis, ukuphucula ixabiso le-nitrogen absorption rate kwiimisipha kunye nokwandisa imveliso yamaseli obomvu. Umjikelezo we-turinabol uxhomekeke kwiimfuno zakho, kodwa ungathatha i-50mg nganye ngeveki okanye kwiiveki ezimbini. Nangona kunjalo, ugqirha wakho unokuyila umjikelo ongcono kakhulu emva kokuqwalasela isimo sakho sempilo.
I-Turinabol (i-Tbol) ibonakala njenge-steroid engcono kunazo zonke kubadlali abaninzi kunye nabakhi bomzimba ngenxa yeenzuzo zayo ezintle ekukhuliseni amanqanaba emandla kunye nokuphucula imisipha. Ukuhambelana nezilwanyana kunye nokutya okufanelekileyo kunye nokusebenza okufanelekileyo uya kuqiniseka ukuba ufumana iziphumo ezifunwayo. I-steroid inikezela umzimba wakho ngeeprotheyini ezibalulekileyo eziza kwenza imisipha ikhule kunye nokutshisa amafutha omzimba. Ukusebenzisa le chiza, awuyi kuba nexhala malunga nemiphumela yecala ye-estrogenic njengokungazinzi, ukugcinwa kwamanzi kunye nokunyuswa kwegazi. Ngako oko, abo baxhomekeke kwimiphumo emibi baya kukhululeka nale nkunkuma.
Ezinye zeenzuzo zeTurinabol ozakuzonwabisa ngazo ngokusebenzisa le mziyo zibandakanya;
Ukuphucula amandla omzimba
Ukubonelela izihlunu ezinzima
Jabulela iziphumo ngaphandle kokufumana ubunzima
Amanqanaba aphantsi emiphumo emibi
Ukuphucula imveliso yemvelo ye-hormone ye testosterone
Isiluleko seTurinabol esinconywayo samadoda yi-20 kwi-50gms ngosuku, kwaye ungayisebenzisa kunye nezinye iziphumo zokufumana iziphumo ezingcono. Kuye kube nembono engafanelekanga yokuba njengombubi womzimba kufuneka usebenzise amayeza aphezulu ukuze ufumane iziphumo. Abasetyhini kufuneka bathathe ii-dose ze-turinabol ezincinci ze-2.5 kwi-7.5mgs ngosuku kuba i-dosage ephezulu ingakhokelela ekuhlaleni.
Turinabol Isiqingatha ubomi
I-Turinabol (i-Tbol) inomdla wesiqingatha seeyure ze-16. Ngaloo ndlela ufanele uthathe umyinge wakho ngosuku ngalunye - nangona kunjalo, abanye ababuciko bafana nokuhlula i-dosage kwixesha le-12 yeeyure ezifanelekileyo ukugcina amanqanaba egazi afanelekileyo.
Le steroid ingasetyenziselwa kunye nezinye izixhobo ezifana neDbol, N2Guard, kunye neCarardine kwiziphumo ezingcono kunye nokunciphisa imiphumo emibi.
Iveki Tbol Dbol N2Guard Cardarine
* ED imele yonke imihla.
Yiyiphi i testersterone ester efanelekileyo kuwe?
Kalokunje ukuba unomboniso wezona zinto zithengiweyo kwi-market, umceli-mngeni uzayo ekumisela okulungileyo kuwe. Abantu banempendulo eyahlukileyo kwiziyobisi ezahlukahlukeneyo, oko kusebenzela umhlobo wakho akunakho ukuphelela. Abantu banomculo ohlukeneyo, kwaye ugqirha omuhle uya kuhlola rhoqo imeko yakho ngaphambi kokukhetha unyango olufanelekileyo.
Ingxaki ephantsi ye testosterone ifuna unyango lwabantu ngabanye ukufumana iziphumo ezifunwayo. Umzekelo, ukuba uhamba ngombono wabantu, abanye baya kukuxelela ukuba i-acetate iyona nto ibhetele, abanye baya kukubhengela ukuba bathenge i-cypionate okanye badibanise. Indlela efanelekileyo yokukhetha i-estosterone esters efanelekileyo kukubona ugqirha kwaye uchaze ingxaki yakho kwaye uya kubeka isigxina esilungileyo.
Ziziphi iziphakamiso zokukhetha i-testosterone esters efanelekileyo kuwe?
Iphupha lazo zonke izakhiwo zomzimba kukuba nomzimba okhangeleka kakuhle, ukuqina komzimba jikelele kunye nezihlunu ezinamandla. Nangona kunjalo, ezinye iimeko ezifana nomveliso ophantsi we-testosterone emzimbeni inokukukhanyela ithuba lokuba uphumelele emsebenzini wakho.
Uninzi lwabalimi bomzimba basebenzisa i-testosterone esters ukufezekisa izidumbu eziyidingayo emva kokuzikhandla kokuzivocavoca. Ngokuqhelekileyo, umzimba wakho awunayo i-testosterone eyaneleyo yokwakha imisipha yakho kwaye ikunike amandla onoyidingayo njengomyili womzimba. Kuthetha ukuba kufuneka ukhulise ngeendawo ezifanelekileyo.
Ngoko ukhetha njani i-testosterone esters?
Okwangoku, imarike igcwele iindidi ezahlukahlukeneyo ze testosterone ezingenza kube nzima ukuba ukhethe okulungileyo. Zonke iimpawu zithi zona zilungileyo kwaye zinike isisombululo kwingxaki yakho. Nangona kunjalo, kufuneka uqaphele xa ufuna uncedo kumsebenzi wezobugcisa. Cinga ngamanqaku alandelayo xa ukhetha i-testosterone yokuvuselela;
1. Qonda okukufunayo
Ngaphambi kokuba utyelele ugqirha wakho ukucebisa, qalisa ukuqonda ingxaki yakho. Ngokomzekelo, ukuba ingxaki yakho ayikwazi ukufezekisa izidumbu eziyimfuneko okanye nokuba ufuna ukutshisa amafutha omzimba wakho oza kwenza umsebenzi wakho ugqirha lula ukufumanisa izidakamizwa ezilungileyo kuwe. I-testosterone ester inezithako ezahlukeneyo zokusombulula ingxaki ethile. Abanye baphelele kubantu phantsi kweyeza kwizityalo ezahlukileyo kanti ezinye azifanele zisetyenziswe namanye amayeza. Musa ukwenza iphutha lokuthenga iziyobisi kwisitishi sakho esiseduze ngaphandle kwekhokelo lobugcisa bezempilo. Uya kubeka ubomi bakho engozini ngenxa yokuba unokufumana impembelelo enokuba nzima ukuyenza impilo yakho.
2. Uhlobo lwe-testosterone esters
The testosterone izikhuselo ziza kwiindidi ezahlukileyo ezinye zendalo kanti ezinye ziyimithi yonyango. Ugqirha wakho uya kuba kwindawo efanelekileyo yokufumanisa uhlobo olungcono emva kokuvavanya imeko yakho yempilo. Amandla akho omzimba kubalulekile xa usebenzisa leziyobisi; umzimba wakho ungeke usebenze kakuhle kunye nezinye izongezo. Phinda kuxhomekeke kwiimfuno zakho ze-testosterone, ugqirha uya kukwazi uhlobo olulungileyo lokukunceda ufezekise iinjongo zakho.
3. Umgangatho nokusebenza
I-testosterone ester isebenza ngendlela efanayo, kodwa umahluko uvela ekusebenzeni kwawo. Imveliso eyahlukeneyo ine-half half-life, ezinye iziyobisi kufuneka zithathwe kanye ngeveki ezinye zezinye kwi2 okanye kwi-3 iintsuku. Iimfuno zakho ngoku ziya kukhokela ugqirha wakho ekukhetheni umyalelo oqaqambileyo kuwe. Ukuba awukhululekile ngeestertosterone esters, ungatshela ugqirha wakho ukuba afune isilonda somlomo.
Inqaku elibaluleke kakhulu xa ukhetha okanye usebenzisa i-testosterone boosters kukubandakanya ugqirha wakho kwisinyathelo ngasinye. Ukunyanga imiphumo emibi kungabiza kwaye ngamanye amaxesha ungeke uguqule imeko. Ungalokothi ubeke phambili ixabiso xa ukhetha i-testosterone esters ezilungileyo kuba kunokwenzeka ukuba ufumane iimveliso ezinobulunga obuphantsi ukuba uya kwimveliso ephantsi. Nangona kunjalo, ungaphindi uphule i-bhanki yakho kwiidakamizwa, qwalasela ukusebenza kunye nemigangatho yeziphumo ozilindeleyo.
Dudley, RE, & Constantinides, PP (2018). Isicelo sePatent No. 15 / 723,985.
Guercia, C., Cianciullo, P., & Porte, C. (2017). Uhlalutyo lwe-testosterone fatty acid esters kwi-digestive gland ye-mussels nge-chromatography ye-liquid-resolution high mass spectrometry. Steroids, 123, 67-72.
Chen, FJ, Patel, MV, Fikstad, DT, Zhang, H., & Gillyar, C. (2018). Isicelo sePatent No. 15 / 714,541.
Indlela yokukhetha i-Steroids i-Powder Suppliers kwi-12 Steps
U-Tykerb (231277-92-2) -Umbulali webele
Zonke Izinto Nge-Trenbolone Inanthate Powder
Izinto ze-10 ozimele wazi ngaphambi kokuba uthathe i-DMAA Yonke Into Oyifunayo Ukuyazi Ngokwakheka Kwe-Dianabol Ukuthengiswa
I-LGD-4033 (VK5211) i-Ligandrol powder